Semalt Expert - Nzira Yokuti Usasvibiswa neGoogle Docs Scam?
Imeyili ine njodzi iri kutenderera, apo anotumira anonzi mumwe munhu waunoziva, anokutumira kukukoka kuti uise pane Google Doc link. Kushandura kubudiswa kunokutsanangurira kunyika yenjodzi. Saka zvinokurudzirwa kubvisa email.
Ryan Johnson, mumwe wevatungamiri vanobva kune Semalt Digital Services, anopa ruzivo rwekuchengetedzwa kweGoogle Docs scam.
Imei inoitika haifaniri kubva kune munhu waunofunga kuti yakabva, asi panzvimbo iyo, iyo email ye phishing nechinangwa chokukunyengedza kuti uone chibvumirano. Chinhu chose chinonzi gimmick chinotarirwa kuisa zvikwiriso kune Gmail yako ku phisher - servidor dedicado windows brasil. Chiitiko chakaipisisa ndecheJohod Podesta, Mutungamiri weDemocratic National Committee, uyo ane hurukuro yake yese ye email yakakonzerwa mushure mekuwira mumusungo.
Pashure pekupedzisira kwekupedzisira, Google yakatora nokutora matanho ekuchengetedza kudzivirira vashandisi vayo kubva emaimeri ekuparadzira Google Docs. Iyo kambani inobvumira zvose zvinyorwa zvinokanganisa, yakabviswa mapeji akabatwa uye yakasundira zvinyorwa kuburikidza nekushandura kwakachengeteka Google inokurudzira vashandi kuti vanyore marudzi ese e phishing emails muGmail.
Zviitiko zvakasiyana-siyana zvekudzivirira zvinotarisirwa kuvhara kupararira kwekurwiswa kwehupenzi, kunyange zvazvo vapikisi vakakwanisa kukanganisa mamiriyoni emakero e-mail kuburikidza nezvinodiwa, Gmail account contact list..
Dambudziko rinotungamirirwa kune vashandisi vebhuku reGoogle rave rakawanda mumwedzi yakapfuura. Hackers vanoita sevanyori vezvokwadi vakakwanisa kutumira magwaro asina kunaka akafanana nema PDF. Iko kune dzimwe nzira dzinofungidzirwa kuti uzvidzivirire kubva pangozi. Iva nechokwadi kuti wakaita kuti zvinhu zviviri zvimbiso zvekuvimbisa zvive paakaunti dzako dzose dzeGoogle. Kuita izvi kunobatsira kurova kune vanotya sezvo vanenge vasingakwanisi kudarika kachigwaro rwechipiri kuvimbiswa, kunyanya kutumirwa nemeseji. Gmail ichagara ichicherechedza uye ichizivisa kana mumwe munhu achiedza kupinda muakaunti yako.
Kana ukanyora chibvumirano chakaipa, unogona kuenda pane peji yako yekugadzirisa account yeGmail uye unodzosera maitiro ose ekupinda mazano kusanganisira maGoogle Docs apps.
Google yakabudisa chirevo chekutevera pamusoro pezvakaitika. Ivo vakataura nezveruzivo rwavo pamusoro pekuchengetedza kweGoogle mabhuku uye vakabudisa tsanangudzo yakazara mushure mekutsvakurudza zvakadzama. Iko kambani yatora matanho ekudzivirira vashandi vavo pamusoro peiyo email phishing campaigns inofanirwa neGoogle Docs, iyo inobata zvishoma kudarika 0.1 muzana yemashandiro eGmail anoshingaira. Google yakakwanisa kupedza chirongwa chakaipa mukati meawa. Ingano yeruzivo bedzi yaive yakawanikwa uye yakasunungurwa nechembera. Tsvakurudzo dzakaratidza kuti hapana imwe dheta yakakanganisa. Saka vashandi vanokurudzirwa kuti varege kutora chero humwe humwe hwehutano pamusoro pezvakaipa. Vashandi varo vanorairwa kuti vatore kudzokorora kwezvimwe zvikwereti kuburikidza nokushanyira Google Checkup link.
Zvinyorwa uye kubatanidza zvisungo hazvifaniri kunge zvichingoerekana zvaitika kunyange kana zvichiita zvichibva kuvanhu vanozivikanwa kwauri. Kana usiri kutarisira mharidzo, nguva dzose tora nguva yekuongorora URL kana iine plain text editor kana kaviri kutarisa kubva kune imwe nyanzvi kuburikidza nedzimwe nzira dzokukurukurirana.